Af-Soomaali - Suomi 100
Dabaaldega sanadguurida boqolaad ee xoriyada Finland 2017
Waxaa soo dhow markey kasoo wareegtey xoriyadii Finland boqol sanadood sanadka 2017 ka. Finland waxay qaadatey xoriyad noqoteyna dowlad dimuqoraadiya 6dii Disembar 1917 kii.
Dabaaldega sanadguurada boqolaad ee 2017 ka dulucudu waa wadajir. Finland qIimaha weyn ee sanadkan wey u furran tahay finnishkoo dhan iyo saxiibadoodba. Dulucda wadajirnimo waa mid ka muuqan doonta dabaaldega sanadguurada iyo weliba barnaamijka sanadka sidii caadiga ee loo qaban jirey
Dabaaldega sanadguurada waxaa lagu qaban meelo kala duwan oo Finland iyo wadanka dibadiisa. Xaflada sanadguurada waxaa la bilaabayaa bilowga sanadka 2017 ka waxayna soconeysaa ilaa maalinta xoriyada ee 6 da Disembar. Sanadkaasna uu ahaado mid ku dhismey kawada shaqeyn iyo ka soo qeybgal. Barnaamijka xaflada sanadguurada waxaa lagu xaqiijin qarni jirsashada xoriyada Finland, xiligan lagu jiro iyo mustaqbalkaba.
Ruux walba waa soo jeedin karaa mashruuc la xiriira barnaamijka Suomi 100. Waanad codsan kartaa marwalba inaad ka qeyb noqoto xaflada sanadguurada ilaa Oktoobar 2017. Tusmada iyo halka laga dalbanaya barnaamijkan foomka codsiga ee shabagada waxaad ka heleysaa bogan iyadoo ku daabacan afafka finnishka, iswiidhishka iyo ingiriiska.
Gebi ahaan xaflada sanadguurada diyaarinteeda waxaa u xilsaaran xafiiska maamulka dowlada mashruuca Suomi 100 ee shaqeynaya. Ururada gobalada iyo lixda magaalo ee ugu waaweyn waadanka ayaa u xil saaran isku xirka iyo dardargelinta hirgelinta xaflada sanadguurada meelo kala duwan oo Finland ah. Cida aad kala xiriireyso iyo xogtoobada waxaad ka heleysaa bogan.
Kusoo dhowow ka qeybqaadashada sanadkan qiimaha weyn u leh Finland ee 2017 ka!